AHOANA NO FANDEFASANA LAHATSARY INSTAGRAM - INSTAGRAM - 2019
Ahoana no fandefasana horonan-tsary avy amin'ny Instagram
Instagram no iray amin'ireo sampan-draharaha sosialy malaza indrindra, ny tena ifantohana dia ny mamoaka sary kely (matetika amin'ny 1: 1 ratio). Ankoatra ny sary, Instagram dia mamela anao hamoaka lahatsary kely. Momba ny inona ireo fomba entina hampidirana horonan-tsary avy amin'ny Instagram, ary horesahina etsy ambany.
Ny endriky ny famoahana lahatsary ao amin'ny Instagram dia niseho lavitra noho ny sary. Voalohany, ny faharetan'ny horonantsary navoaka dia tsy tokony hihoatra ny 15 segondra, ary ny fotoana dia nitombo ho iray minitra. Indrisy anefa, Instagram dia tsy manome ny fahafahana maka horonantsary amin'ny smartphone na solosaina, ary mifandraika amin'izany, miaraka amin'ny fiarovana ny zon'ny mpampiasa azy. Na dia izany aza dia misy anton-draharahan'ny famandrihan-antoko fahatelo, izay horesahina etsy ambany.
Fomba 1: iGrab.ru
Mora sy, indrindra indrindra, azonao haingana maimaim-poana horonan-tsarimihetsika amin'ny findainao na solosainao amin'ny fampiasana ny serivisy amin'ny Internet amin'ny iGrab. Eto ambany eto dia mijery akaiky ny fomba hanaovana ilay download.
Manintona ny sainareo izahay fa ny lahatsary maimaim-poana miaraka amin'ny fanampian'i iGrab.ru dia tsy azo atao afa-tsy amin'ny kaonty misokatra.
Mamonjy lahatsary amin'ny telefaona
Raha te haka horonantsary avy amin'ny Instagram amin'ny fahatsiarovan'ny smartphone ianao dia tsy voatery mandefa fampiharana manokana, satria ny dingana manontolo dia handeha amin'ny navigateur rehetra.
Voalohany indrindra, mila mila rohy mankany amin'ilay lahatsary izay havoaka ianao. Mba hanaovana izany, mitantana ny fampihetsehana Instagram amin'ny findainao, finday ary manokatra ny video tianao. Ao amin'ny zoron-ankavanana havanana amin'ny totozy amin'ny ellipsis, dia mifidiana "Copy Link".
Manangana tranokala web napetraka ao amin'ny fitaovana ary mankany amin'ny tranokalan'ny serivisy an-tserasera iGrab.ru. Ho tonga haingana ianao hampiditra rohy mankany amin'ilay lahatsary, ary avy eo dia mila mifidy ianao "Find".
Rehefa miseho eo amin'ny efijery ilay horonan-tsary, kitiho ny bokotra etsy ambany. "Download ny rakitra".
Horonantsary lahatsary vaovao no halefa haingana ao anaty navigateur. Raha manana fitaovana Android OS ianao dia horonan-tsary mankany amin'ny findainao ny lahatsary.
Raha mifototra amin'ny iOS ny tompon'ilay gadget, dia sarotra kokoa ny asa, satria ny tsy fisian'ity rafitra ity dia tsy hamela anao hampiakatra avy hatrany ny horonan-tsary mankany amin'ny fahatsiarovan'ny fitaovana. Azo atao anefa izany raha apetraka amin'ny smartphone ny fampiharana Dropbox. Raha manao izany ianao, dia miantsoa amin'ny faran'ny varavarankala amin'ny bokotra voatondro ao amin'ny menu fanampiny ary dia fidio ilay singa "Mamonjy ny Dropbox".
Rehefa afaka fotoana fohy dia hiseho ao amin'ny laha-tahiry Dropbox ilay lahatsary. Ny zavatra rehetra tokony hataonao dia manomboka ny fampiharana Dropbox ao amin'ny telefaoninao, mifidiana ny bokotra menu fanampiny ao amin'ny zoro havanana amin'ny farany, ary avy eo tadiavo "Export".
Farany, mifidiana ny singa "Save Video" ary miandry ny fampiharana hamita.
Mamonjy lahatsary amin'ny ordinatera
Toy izany koa, ny famoahana ireo lahatsary mampiasa ny iGrab.ru dia azo tanterahina amin'ny solosaina ihany koa.
Indray mandeha, mila mijery rohy mankany amin'ilay lahatsary avy amin'ny Instagram ianao, izay efa nomanina ho alefa. Mba hanaovana izany, mandehana ao amin'ny tranokalan'ny Instagram, sokafy ny lahatsary ilaina, ary andramo ny rohy mankany aminy.
Mandehana any amin'ny tranonkalan'ny iGrab.ru amin'ny tranokala iray. Ampidiro ao amin'ny lahatsary etsy ambany ny rohy ary tsindrio avy eo ilay bokotra. "Find".
Rehefa aseho eo amin'ny efijery ilay horonan-tsary, dia fidio ilay bokotra etsy ambany. "Download ny rakitra".
Ny tranonkala dia hanomboka haingana ny horonantsary amin'ny solosainao. Amin'ny alàlan'ny fanamarinana, ny fampidinana dia atao ao anaty ordinatera. "Downloads".
Fomba 2: Mampidira video amin'ny solosaina mampiasa pejin'ny pejy
Raha vao jerena dia toa somary sarotra ihany ity fomba fiasa ity, saingy raha ny tena izy, dia tsotra ny zava-drehetra. Anisan'ireo tombontsoa azo avy amin'io fomba io ny fahafahana mandefa avy amin'ny kaonty raketina (mazava ho azy, raha nosoratra tamin'ny pejy manokana ianao ao amin'ny mombamomba anao), ary koa tsy ilaina ny mampiasa fitaovana fanampiny (afa-tsy ny navigateur sy ny mpamoaka lahatsoratra).
Noho izany, mila miditra ao amin'ny pejin'ny tranonkala Instagram ianao ary, raha ilaina, dia manatanteraka alàlana.
Hitanisa ity pejy ity Ahoana no hidirana amin'ny Instagram
Rehefa tonga soa aman-tsara ny fidirana dia mila manokatra horonan-tsary tianao ianao, tsindrio eo ankavanana ary mifantina ny singa ao amin'ny sakafo mifandimbadika. "Explore Element" (ny singa dia azo antsoina hafa, ohatra, "Jereo ny fehezan-dalàna" na zavatra toy izany).
Amin'ny tranga misy anay, ny code code dia miseho eo amin'ny sehatra havanana amin'ny tranonkala. Ilainao ny mitady andalan-tsarin'ny pejin'ny pejy, koa antsoy ny fikarohana miaraka amin'ny fehintsoratra Ctrl + F ary asio "mp4" ao anatiny (tsy misy quotes).
Ny valin'ny fikarohana voalohany dia hampiseho ny zavatra ilaintsika. Tsindrio eo amin'ny bokotra ankavia amin'ny bokotra havia mba hifidianana azy, ary alaivo ny sombin-kajy Ctrl + C to copy.
Amin'izao fotoana izao dia misy mpamoaka lahatsoratra amin'ny endri-tsoratra iray manontolo miditra ao anaty lahatsary - mety ho ny "Notepad" na ny Word Functional. Rehefa vita ny fanokafana ilay tonian-dahatsoratra dia ampidino ireo vaovao efa voavaky teo aloha Ctrl + V.
Avy amin'ny fampidirana rakitra dia tokony ho azonao ny adiresy ao amin'ny clip. Ny rohy dia hijery toy izao: //ssylka_na_video.mp4. Ity sombin-dahatsoratra ity izay mila kopia (hita mazava ao amin'ny pikantsary etsy ambany).
Sokafy amin'ny tranokao vaovao ny navigateur ary apetaho ao anaty bar ny adiresy ny kopia. Tsindrio ny fidirana. Ny sarimihetsika dia aseho eo amin'ny efijery. Tsindrio eo ankavanana ary mifidiana "Download video" na tsindrio avy hatrany amin'ny bokotra iray eo amin'ny tranokala fanovozam-pejy, raha mazava ho azy, misy iray.
Download dia hanomboka. Raha vantany vao vita ilay rindranasa, dia ho hitanao ny rakitra ao amin'ny solosainao (raha alahatra, ny tahiry rehetra dia voavonjy ao anaty ordinatera "Downloads").
Fomba 3: Mamakia amin'ny ordinateranao mampiasa ny InstaGrab service
Ny fomba fiasa voalaza etsy ambony dia mety ho sahiran-tsaina ho anao, noho izany dia azo atao ny manatsotra ny asa raha mampiasa serivisy manokana amin'ny aterineto ianao mba haka horonan-tsary avy amin'ny Instagram amin'ny solosainao.
Ny nuance dia mitoetra amin'ny hoe tsy azo atao ny manatanteraka fahazoan-dalana ao amin'ny pejin-tranonkala, izay midika fa tsy ho afaka haka horonantsary avy amin'ny kaonty raketina ianao.
Raha te hampiasa an'io vahaolana io ianao, dia mila mandeha amin'ny pejy Instagram ianao, mahita ny rakitra video tianao ary avy eo dia aorian'ilay rohy mankany aminy avy amin'ny adiresy bar.
Mankanesa ao amin'ny pejy InstaGrab. Ampidiro rohy ao anaty boaty fikarohana ao amin'ilay tranonkala, ary mifidiana ilay bokotra "Download".
Hahita ny horonan-tsarinao ilay tranonkala, avy eo dia mila tsindrio ny bokotra "Download video".
Ny tabilao vaovao dia ho noforonina ao amin'ny tranokala izay mampiseho ny loha-hevitra amin'ny download. Mila manindry ny totozy amin'ny bokotra ankavanana ianao ary fidio ilay singa "Save" na tsindrio ity bokotra ity raha toa ka asehon'ilay tranonkala ny eo amin'ny tontonana.
Fomba 4: Mamaky lahatsary amin'ny smartphone mampiasa i InstaSave
Hatreto, ny tranonkalanay dia efa namaritra ny fampiasana ny InstaSave fampiharana afaka mamonjy sary. Ankoatr'izay, ny fampiharana dia ahafahanao mivoaka amim-pahombiazana sy video.
Hitanisa ity pejy ity Ahoana no fandefasana sary avy Instagram
Mariho fa ny fampiharana dia tsy manana fahafahana miditra ao amin'ny kaontinao, izay midika fa tsy ho afaka haka horonan-tsary avy amin'ny profil-tsarimihetsika misy anao ianao.
Voalohany indrindra, raha mbola tsy tafapetraka ao amin'ny smartphone ianao dia tokony ho hitanao ao amin'ny Play Store na ny App Store na manaraka ny iray amin'ireo rohy izay hitarika mankany amin'ny pejin-drakitra.
Download InstaSave App amin'ny iPhone
Download InstaSave app android for Android
Sokafy ny app Instagram. Voalohany tokony handika ny rohy amin'ilay lahatsary. Raha manao izany ianao, dia jereo ilay horonantsary, tadiavo ao amin'ny zoro-havanana amin'ny ilany havia amin'ny ellipsis mba hanangona sakafo hafa, ary mifidiana "Rohy kopia".
Atsaharo ny InstaSave. Ao amin'ny bara fitadiavana, mila mametaka rohy efa nopiazina ianao ary tadiavo ny bokotra "Preview".
Ny fampiharana dia hanomboka hikaroka horonantsary. Rehefa aseho eo amin'ny efijery izy dia tsy maintsy mametaka fotsiny ilay bokotra "Save".
Ny iray amin'ireo fomba fiasa omena dia azo antoka fa hamonjy ny lahatsary tianao indrindra amin'ny Instagram amin'ny findainao na solosaina. Raha manana fanontaniana ianao momba ny lohahevitra dia avelao izy ireo haneho hevitra.